May 2020 - ShwengweGames
နှလုံးအဆို့ရှငျမလုံလို့ ခှဲစိတျကုသဖို့အတှကျငှကွေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ကြောငျးသားလေးအတှကျ သူမနဲ့အတူဝိုငျးပွီးလှူဒါနျးပေးဖို့တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး
ပွညျ့သူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ထကျထကျမိုးဦးကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမူပနျတိုငျးကိုဆှတျခူးရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။တဈခတျေတဈခါကကွျောငွာဘုရငျမတဈပါးလို့တောငျတငျစားရလောကျအောငျပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမူကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။အခုဆိုရငျတော့ ထကျထကျမိုးဦးက ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ အနုပညာအလုပျတှကေို အနညျးငယျသာလုပျကိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာဆိုရငျတော့ ထကျထကျမိုးဦးက နှလုံးအဆို့ရှငျမလုံလို့ ခှဲစိတျကုသဖို့အတှကျငှကွေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ကြောငျးသားလေးအတှကျ သူမနဲ့အတူဝိုငျးပွီးလှူဒါနျးပေးဖို့အခုလိုပဲတောငျးဆိုလာခဲ့ပါတယျ။ “ ဒီပုံလေးကိုတခြို့မွငျဘူးမှာပါမောငျဟိနျးထကျထကျနဝမတနျးကြောငျးသားလေးနှလုံးအဆို့ရှငျမလှုံလို့မကွာခငျပငျလုံဆေးရုံကွီးမှာခှဲစိတျကုသရမှာကွောငျ့ငှကွေေးမလုံလောကျမှု့အခကျအခဲဖွဈနပေါတယျထကျလဲအလှူငှပေါဝငျထားပါတယျထကျနဲ့အတူဝိုငျးပွီးတတျနိုငျသလောကျလှူဒါနျးပေးကွဖို့တောငျးဆိုပါတယျ။
မောငျဟိနျးထကျထကျရဲ့မိခငျဖုနျးနံပါတျနဲ့ဘဏျအကောငျ့စာအုပျဖျောပွထားပါတယျတိုကျရိုကျဆကျသှယျလှူတနျးနိုငျပါတယျရှငျဒျေါအေးခငျမွ ဖုနျး 09774386745မွနျမာ့ရှဆေ့ောငျဘဏျ 0840131084004254014အားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျရှငျ။”ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူနှုကှနျရကျကနေ ပွောထားတာပဲဖွဈပါတယျ။အလှူရှငျတှအေမွနျဆုံးရရှိပွီး ခှဲစိတျနိုငျပါစေ လို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျနျော…။
Source-Htet Htet Moe Oo
နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံလို့ ခွဲစိတ်ကုသဖို့အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးအတွက် သူမနဲ့အတူဝိုင်းပြီးလှူဒါန်းပေးဖို့‌တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
ပြည့်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မူပန်တိုင်းကိုဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကကြော်ငြာဘုရင်မတစ်ပါးလို့တောင်တင်စားရလောက်အောင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမူကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ထက်ထက်မိုးဦးက ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကို အနည်းငယ်သာလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ ထက်ထက်မိုးဦးက နှလုံးအဆို့ရှင်မလုံလို့ ခွဲစိတ်ကုသဖို့အတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးအတွက် သူမနဲ့အတူဝိုင်းပြီးလှူဒါန်းပေးဖို့အခုလိုပဲတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ “ ဒီပုံလေးကိုတချို့မြင်ဘူးမှာပါမောင်ဟိန်းထက်ထက်နဝမတန်းကျောင်းသားလေးနှလုံးအဆို့ရှင်မလှုံလို့မကြာခင်ပင်လုံဆေးရုံကြီးမှာခွဲစိတ်ကုသရမှာကြောင့်ငွေကြေးမလုံလောက်မှု့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ထက်လဲအလှူငွေပါဝင်ထားပါတယ်ထက်နဲ့အတူဝိုင်းပြီးတတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
မောင်ဟိန်းထက်ထက်ရဲ့မိခင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဘဏ်အကောင့်စာအုပ်ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူတန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်အေးခင်မြ ဖုန်း 09774386745မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် 0840131084004254014အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူနှုကွန်ရက်ကနေ ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလှူရှင်တွေအမြန်ဆုံးရရှိပြီး ခွဲစိတ်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်…။
Sex Education ( Season3) ထုတျလှငျ့ပွသမယျ့ရကျ နောကျကဖြှယျရှိ
Netflix ရဲ့ အောငျမွငျတဲ့ series တှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ Sex Education ရဲ့ Season3ကတော့ ထုတျလှငျ့ပွသဖို့ရကျနောကျကမြယျ့အလားအလာရှိနပေါပွီ။
Season2ခုအထိ ထှကျရှိပွီးထားတဲ့ အဆိုပါ series ဟာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအခွအေနတှေကွေောငျ့ Season အသဈရဲ့ ထုတျလုပျမှုအပိုငျးကို ကွနျ့ကွာနတောဖွဈပွီး လာမယျ့ သွဂုတျလရောကျမှသာ ထုတျလှငျ့မှုအပိုငျးကို ပွနျလညျစတငျနိုငျမယျလို့သိရပါတယျ။
Sex Education ဟာ ပထမ Season နှဈခုလုံးကို ဇနျနဝါရီလတှမှော ပုံမှနျထုတျလှငျ့ပွသခဲ့တာဖွဈပမေယျ့လညျး အခုလာမယျ့ Season3ကိုတော့ ဇနျနဝါရီလအတှငျးမှာ ထုတျလှငျ့ပွသသှားဖို့ မသခြောတော့ဘူးလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ဒါဟာ Season3ကို အမွနျဆုံးကွညျ့ရဖို့ စောငျ့မြှျောနတေဲ့ ပရိတျသတျတှအေတှကျတော့ အားမလို အားမရဖွဈစရာတဈခုပါပဲ။
Sex Education ရဲ့ Season 1 ကိုတော့ ၂၀၁၉ ခုနဈ ဇနျနဝါရီလ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ Netflix ကနေ စတငျထုတျလှငျ့ခဲ့ပွီး Season2ကိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနဈ ဇနျနဝါရီ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ စတငျထုတျလှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့ ပရိတျသတျတှအေနနေဲ့ Season3ကိုလညျး လာမယျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာ မွငျတှရေ့ဖို့ မြှျောလငျ့ထားကွပမေယျ့လညျး အခုလိုမြိုး ပွသဖို့ရကျနောကျကမြယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ အကယျြတဝငျ့ထှကျပျေါလာတာဖွဈပါတယျ။
soure – pop culture times
Sex Education ( Season3) ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့်ရက် နောက်ကျဖွယ်ရှိ
Netflix ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ series တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sex Education ရဲ့ Season3ကတော့ ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့ရက်နောက်ကျမယ့်အလားအလာရှိနေပါပြီ။
Season2ခုအထိ ထွက်ရှိပြီးထားတဲ့ အဆိုပါ series ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အခြေအနေတွေကြောင့် Season အသစ်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကို ကြန့်ကြာနေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် သြဂုတ်လရောက်မှသာ ထုတ်လွှင့်မှုအပိုင်းကို ပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
Sex Education ဟာ ပထမ Season နှစ်ခုလုံးကို ဇန်နဝါရီလတွေမှာ ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်လည်း အခုလာမယ့် Season3ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားဖို့ မသေချာတော့ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ Season3ကို အမြန်ဆုံးကြည့်ရဖို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ အားမလို အားမရဖြစ်စရာတစ်ခုပါပဲ။
Sex Education ရဲ့ Season 1 ကိုတော့ ၂၀၁၉ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ Netflix ကနေ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး Season2ကိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနစ် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့မှာ စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ Season3ကိုလည်း လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ မြင်တွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်ထားကြပေမယ့်လည်း အခုလိုမျိုး ပြသဖို့ရက်နောက်ကျမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အကျယ်တဝင့်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
စှယျတျောရှကျဟငျးခြို နှငျ့ စှယျတျောရှကျရဲ့ ဆေးဖကျဝငျပုံ
စှယျတျောရှကျအနုလေးတှထှေကျတဲ့အခြိနျဆို အရှကျနုလေးတှေ ခူးပွီး ဟငျးခြိုခကျြသောကျကွပါတယျ။စှယျတျောရှကျက ဟငျးခြိုလညျးခကျြသောကျလို့ရသလို အရှကျကိုရနှေေးဖြျောပွီး ကွကျသှနျနီပါးပါးလှီးပွီး ဆီစိမျးလေးနဲ့သုပျစားလို့လညျးအရမျးကောငျးပါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူ ငရုတျကောငျးပုဇှနျခွောကျ ထောငျးထားပါ။ စားနိုငျသလောကျရပေမာဏထညျ့ပွီး ဆူပှကျလာသညျအထိတညျပါ။ မြှငျငပိအနညျးငယျနှငျ့ အပျေါမှ ထောငျးထားတာမြားကို ထညျ့ပါ။ ဟငျး အိုးဆူလာရငျခြှထေားသော စှယျတျောရှကျမြားကိုထညျ့ပါ။အရသာမှုနျ့ ခတျပါ။ ဟငျးခြိုအိုး ဆူလာပွီဆို ရပါပွီ။
စှယျတျောရှကျနုမြားကိုဟငျးခြိုခကျြသောကျ၍ လညျးကောငျး ၊ကွျောခကျြပွုလုပျ၍လညျးကောငျး၊စားသုံးနိုငျ သညျ။ အပူငွိမျးစခွေငျး အိပျပြျောစခွေငျး နှလုံးကို အားရှိစခွေငျး ၊ အကြိုးမြား ရရှိစပေါသညျ။ စှယျတျောနီသညျ အေးဖနျ၍ဝမျးမီးကို တောကျစသေညျ။ ဝမျးကို ခြုပျစတေကျသညျ။ သလိပျနာ ၊ လနောကို နိုငျ၏။
အဝါပှငျ့သညျ ဖနျ၏။ စှယျတျော အငယျမြိုးသညျတွိဒေါသနာ၊ဦးခေါငျး၍ ပေါကျသောအနာကိုနိုငျ၏။ နို့ရညျကို ပှားစတေကျသညျ။ စှယျတျောပနျးဖွူကို ပွုတျသောကျပါက ဆီးနညျးခွငျး ၊အသညျးရောငျအသားဝါဖွဈခွငျး စသညျ့ရောဂါမြား ပြောကျသညျ။
ခရမျးရောငျသညျ သှေးအညဈအကွေးကိုပယျစှနျ့၍မီးယပျသှေးဆုံးပြောကျ သညျ။ အညှနျ့မြားကိုပွုတျသောကျခွငျးဖွငျ့ သှေးပုပျကငျးစငျပွီး အသကျရှညျ ကနျြးမာစသေညျ။ အဆဈရောငျရမျးခွငျး ၊ အဆဈကိုကျခွငျး ဆီအနယျကခြွငျးတို့ကို ပြောကျစသေညျ။အမွဈပွုတျရညျကို သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ဆီးလမျးကွောငျး နာကငျြကိုကျခဲခွငျးကိုပြောကျစသေညျ။ ရငေတျခွငျးကိုပယျ၍ ထုံကငျြခွငျးကို ကာကှယျနိုငျသညျ။
Credit-SayarMyo,Thura Htayaung / ဖအေောငျ
စွယ်တော်ရွက်အနုလေးတွေထွက်တဲ့အချိန်ဆို အရွက်နုလေးတွေ ခူးပြီး ဟင်းချိုချက်သောက်ကြပါတယ်။စွယ်တော်ရွက်က ဟင်းချိုလည်းချက်သောက်လို့ရသလို အရွက်ကိုရေနွေးဖျော်ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပြီး ဆီစိမ်းလေးနဲ့သုပ်စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်းပုဇွန်ခြောက် ထောင်းထားပါ။ စားနိုင်သလောက်ရေပမာဏထည့်ပြီး ဆူပွက်လာသည်အထိတည်ပါ။ မျှင်ငပိအနည်းငယ်နှင့် အပေါ်မှ ထောင်းထားတာများကို ထည့်ပါ။ ဟင်း အိုးဆူလာရင်ချွေထားသော စွယ်တော်ရွက်များကိုထည့်ပါ။အရသာမှုန့် ခတ်ပါ။ ဟင်းချိုအိုး ဆူလာပြီဆို ရပါပြီ။
စွယ်တော်ရွက်နုများကိုဟင်းချိုချက်သောက်၍ လည်းကောင်း ၊ကြော်ချက်ပြုလုပ်၍လည်းကောင်း၊စားသုံးနိုင် သည်။ အပူငြိမ်းစေခြင်း အိပ်ပျော်စေခြင်း နှလုံးကို အားရှိစေခြင်း ၊ အကျိုးများ ရရှိစေပါသည်။ စွယ်တော်နီသည် အေးဖန်၍ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။ ဝမ်းကို ချုပ်စေတက်သည်။ သလိပ်နာ ၊ လေနာကို နိုင်၏။
အဝါပွင့်သည် ဖန်၏။ စွယ်တော် အငယ်မျိုးသည်တြိဒေါသနာ၊ဦးခေါင်း၍ ပေါက်သောအနာကိုနိုင်၏။ နို့ရည်ကို ပွားစေတက်သည်။ စွယ်တော်ပန်းဖြူကို ပြုတ်သောက်ပါက ဆီးနည်းခြင်း ၊အသည်းရောင်အသားဝါဖြစ်ခြင်း စသည့်ရောဂါများ ပျောက်သည်။
ခရမ်းရောင်သည် သွေးအညစ်အကြေးကိုပယ်စွန့်၍မီးယပ်သွေးဆုံးပျောက် သည်။ အညွန့်များကိုပြုတ်သောက်ခြင်းဖြင့် သွေးပုပ်ကင်းစင်ပြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာစေသည်။ အဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း ၊ အဆစ်ကိုက်ခြင်း ဆီအနယ်ကျခြင်းတို့ကို ပျောက်စေသည်။အမြစ်ပြုတ်ရည်ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဆီးလမ်းကြောင်း နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကိုပျောက်စေသည်။ ရေငတ်ခြင်းကိုပယ်၍ ထုံကျင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
Credit-SayarMyo,Thura Htayaung / ဖေအောင်
တဈခါတဈလေ အစာမကွေ၊ရငျပွညျ့နတောမြိုးကွောငျ့ ဗိုကျအောငျ့တာမြိုးကဖွဈတတျပမေယျ့ ဒီလို ဗိုကျအောငျ့တာမြိုးဆိုရငျတော့ လုံးဝမပေါ့ဆဘဲ ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျဆုံးပွသသငျ့ပါတယျနျော…
၁. ရရှေညျဖွဈပျေါနတေဲ့ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး
တဈခါတဈလဗေိုကျအောငျ့တာမြိုးထကျပိုပွီးသုံးလထကျပိုကွာအောငျ မကွာ ခဏအောငျ့တတျနမေယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့အမွနျဆုံးပွသငျ့နပေါပွီ… ဗိုကျအောငျ့တာအပွငျ ဝမျးခြုပျတာ၊ ဝမျး လြှောတာစတဲ့ လက်ခဏာတှရှေိမရှိကိုပါ စောငျ့ကွညျ့သငျ့ပါတယျ
ဗိုကျအောငျ့တဲ့အခါ တဈဆကျတညျး မူးဝတော၊ အော့အနျတာမြိုးရှိမယျဆိုရငျတော့ အစာအဆိပျသငျ့တာဖွဈနိုငျပါတယျ…တဈခါတဈလမှောအဲဒီထကျပိုပွငျးထနျတဲ့ အူလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာ၊ အစာအိမျအနာဖွဈတာမြိုးတှပေါဖွဈနိုငျတာမို့ ဆရာဝနျဆီအမွနျဆုံးသှားသငျ့ပါတယျနျော.
ဗိုကျလညျးအောငျ့နမေယျ၊ အနျတဲ့အခါ၊ဝမျးသှားတဲ့အခါ သှေးပါနမေယျဆိုရငျလညျး မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး… ဝမျးထဲမှာသှေးပါတဲ့အခါ အမွဲတမျး အနီရောငျဖွဈမနဘေဲ အမညျးရောငျလညျးဖွဈနိုငျတာကို သတိပွုရပါမယျ
ရုတျတရကျကွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျဗိုကျအောငျ့ပွီး အသကျပါရှူလို့မရဖွဈနပွေီဆိုရငျတော့ကြောကျကပျမှာကြောကျတညျတာ၊အူအတကျပေါကျတာမြိုးတှဖွေဈနိုငျပါတယျဆရာဝနျနဲ့အမွနျဆုံးမပွသရငျ အသကျအန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ
ဝိတျခနြတောမြိုးကွောငျ့မဟုတျဘဲ ကိုယျအလေးခြိနျရုတျတရကျကဆြငျးမယျ၊ဗိုကျလညျးအောငျ့မယျဆိုရငျလညျး ကွီးမားတဲ့ရောဂါတဈခုခုဖွဈနနေိုငျတာမို့ ဆရာဝနျဆီသှားပွီး အမွနျဆုံးအဖွရှောသငျ့ပါတယျ
ဗိုကျလညျးအောငျ့မယျ၊ခန်ဓာကိုယျအ လေးခြိနျလညျး မွငျ့တကျနမေယျဆိုရငျတော့ တုပျကှေးလိုကူးစကျရောဂါပိုးတဈခုခုဖွဈတာဖွဈနိုငျပါတယျ ဆရာဝနျနဲ့အမွနျဆုံးပွသသငျ့ပါတယျ
Writer- Myat Thinzar(XYZ News)
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း ၆ မျိုး
တစ်ခါတစ်လေ အစာမကြေ၊ရင်ပြည့်နေတာမျိုးကြောင့် ဗိုက်အောင့်တာမျိုးကဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဒီလို ဗိုက်အောင့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ လုံးဝမပေါ့ဆဘဲ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်နော်…
၁. ရေရှည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း
တစ်ခါတစ်လေဗိုက်အောင့်တာမျိုးထက်ပိုပြီးသုံးလထက်ပိုကြာအောင် မကြာ ခဏအောင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသင့်နေပါပြီ… ဗိုက်အောင့်တာအပြင် ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်း လျှောတာစတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိမရှိကိုပါ စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်
ဗိုက်အောင့်တဲ့အခါ တစ်ဆက်တည်း မူးဝေတာ၊ အော့အန်တာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အစာအဆိပ်သင့်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်…တစ်ခါတစ်လေမှာအဲဒီထက်ပိုပြင်းထန်တဲ့ အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ၊ အစာအိမ်အနာဖြစ်တာမျိုးတွေပါဖြစ်နိုင်တာမို့ ဆရာဝန်ဆီအမြန်ဆုံးသွားသင့်ပါတယ်နော်.
ဗိုက်လည်းအောင့်နေမယ်၊ အန်တဲ့အခါ၊ဝမ်းသွားတဲ့အခါ သွေးပါနေမယ်ဆိုရင်လည်း မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး… ဝမ်းထဲမှာသွေးပါတဲ့အခါ အမြဲတမ်း အနီရောင်ဖြစ်မနေဘဲ အမည်းရောင်လည်းဖြစ်နိုင်တာကို သတိပြုရပါမယ်
ရုတ်တရက်ကြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဗိုက်အောင့်ပြီး အသက်ပါရှူလို့မရဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျောက်ကပ်မှာကျောက်တည်တာ၊အူအတက်ပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးမပြသရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်
ဝိတ်ချနေတာမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်တရက်ကျဆင်းမယ်၊ဗိုက်လည်းအောင့်မယ်ဆိုရင်လည်း ကြီးမားတဲ့ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နေနိုင်တာမို့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီး အမြန်ဆုံးအဖြေရှာသင့်ပါတယ်
ဗိုက်လည်းအောင့်မယ်၊ခန္ဓာကိုယ်အ လေးချိန်လည်း မြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တုပ်ကွေးလိုကူးစက်ရောဂါပိုးတစ်ခုခုဖြစ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်
အသကျအရှယျအိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကို ဘယျသူမှ ဆနျ့ကငျြလို့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျမတနျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကိုတော့ အသားအရထေိနျးသိမျးနညျး အစားအသောကျသတိထားစားခွငျးတှနေဲ့ တားဆီးနိုငျပါတယျ။ အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ အရေးကွောငျးတှကေတော့ ပျေါလာတာပါပဲ။ ဒီအရေးကွောငျးတှကေို (၇) ရကျအတှငျးသကျသာစမေယျ့ ကိုးရီးယားနညျးလမျးတဈမြိုးကို ဝမြှေပေးလိုပါတယျ။ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေ သဘာဝပစ်စညျးတှမေို့ စိတျခစြှာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျနျော …။
ပွငျဆငျရ လှယျကူပါတယျ။ပါဝငျပစ်စညျးတှကေအကုနျအကြ သကျသာပါတယျ။ခရငျကအစိုဓာတျပေးပွီးအရေးကွောငျးတှကေိုဖယျရှားပေးပါတယျအသားအရေ အမြိုးအစားတိုငျးအတှကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
အသားအရပွေောငျးလဲလာတာကို ခရငျလိမျးပွီး ၇ ရကျအတှငျး သတိထားမိ လာပါလိမျ့မယျ။ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့
ကွကျဥအနှဈ တဈလုံး၊သံလှငျဆီ တဈဇှနျး၊အုနျးဆီနှဈဇှနျး၊ပြားရညျတဈဇှနျး
ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကို အနှဈပုံစံရတဲ့အထိ မှပေေးပါ။ ပွီးနောကျခှကျတဈခှကျထဲပွောငျးထညျ့ပေးပါ။ရခေဲ သတ်ေတာ ထဲတှငျ ထားနိုငျပါတယျ။
မကျြနှာသဈပွီးနောကျခရငျကိုလိမျးနိုငျပါပွီ။ပွီးနောကျနှိပျနယျပေးပါ။ဒီခရငျသုံးဖို့ အသငျ့တျောဆုံးအခြိနျကတော့အိပျရာမဝငျခငျပါ။တဈညလုံးအသားထဲစိမျ့ဝငျပါစေ။မနကျနိုးတဲ့အခြိနျ နူးညံ့ခြောမှတေဲ့အသားအရကေိုပိုငျဆိုငျပါလိမျ့မယျ။
၇ ရကျတိတိဆကျတိုကျလိမျးပေးပါ။ ၇ ရကျသုံးပွီးနောကျမှာတော့တဈပတျမှာ တဈကွိမျသာအသုံးပွုပေးပါနျော။
May Thu Soe
၇ ရက်အတွင်း အရေးအကြောင်းတွေ လျော့ပါးစေမယ့် အလှအပထိန်းသိမ်းနည်း
အသက်အရွယ်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ဘယ်သူမှ ဆန့်ကျင်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချိန်မတန်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုတော့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း အစားအသောက်သတိထားစားခြင်းတွေနဲ့ တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အရေးကြောင်းတွေကတော့ ပေါ်လာတာပါပဲ။ ဒီအရေးကြောင်းတွေကို (၇) ရက်အတွင်းသက်သာစေမယ့် ကိုးရီးယားနည်းလမ်းတစ်မျိုးကို ဝေမျှပေးလိုပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက သဘာဝပစ္စည်းတွေမို့ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော် …။
ပြင်ဆင်ရ လွယ်ကူပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကအကုန်အကျ သက်သာပါတယ်။ခရင်ကအစိုဓာတ်ပေးပြီးအရေးကြောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်အသားအရေ အမျိုးအစားတိုင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေပြောင်းလဲလာတာကို ခရင်လိမ်းပြီး ၇ ရက်အတွင်း သတိထားမိ လာပါလိမ့်မယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့
ကြက်ဥအနှစ် တစ်လုံး၊သံလွင်ဆီ တစ်ဇွန်း၊အုန်းဆီနှစ်ဇွန်း၊ပျားရည်တစ်ဇွန်း
ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို အနှစ်ပုံစံရတဲ့အထိ မွှေပေးပါ။ ပြီးနောက်ခွက်တစ်ခွက်ထဲပြောင်းထည့်ပေးပါ။ရေခဲ သေတ္တာ ထဲတွင် ထားနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာသစ်ပြီးနောက်ခရင်ကိုလိမ်းနိုင်ပါပြီ။ပြီးနောက်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ဒီခရင်သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ကတော့အိပ်ရာမဝင်ခင်ပါ။တစ်ညလုံးအသားထဲစိမ့်ဝင်ပါစေ။မနက်နိုးတဲ့အချိန် နူးညံ့ချောမွေ့တဲ့အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၇ ရက်တိတိဆက်တိုက်လိမ်းပေးပါ။ ၇ ရက်သုံးပြီးနောက်မှာတော့တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုပေးပါနော်။